Inona no marina momba ny famonoana an'i Derk Wiersum ary inona no dikan'ny hoe "vavolombelona ny satroboninahitra"? : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 18 September 2019	• 29 Comments
In ity lahatsoratra ity Nosoratako ny fomba fakàna an-keriny an'i Willem Holleeder Heineken sy ny famonoana natao azy dia mety ho PsyOps izay mila manomana lalàna momba ny foto-kevitry ny 'vavahadin'ny satroboninahitra ". Ny fanoratana ny satroboninahitra satroboninahitra (nateraky ny Holleeder PsyOp?) Dia midika fa afaka manenjika izay tadiaviny ny fanjakana, satria mety ho tsy mitonona anarana mihitsy aza ilay vavolava satroboninahitra (amin'ny alàlan'ny fizotran'ny "vavolombelona tsy nitonona anarana". Ity fanafihana ny "Derk Wiersum" ity dia afaka miantoka fa ny mpisolovava mpiaro dia afaka manomboka tsy mitonona anarana na hiditra amin'ny programa fiarovana. Avy eo mety manana manana satroboninahitra tsy fantatra anarana ianao, arovan'ny mpisolovava tsy mitonona anarana izay manana fijoroana ho vavolombelona matotra ho resy lahatra. Raha fintinina: azon'ny fanjakana ialana ny olona rehetra tsy misy porofo.
Izay angamba no famintinana fohy fohy, fa indraindray ilay biby dia tsy maintsy manonona anarana fotsiny. Talohan'izay androany, tao amin'ny lisitry ny Facebook-ko, nanontany tena aho raha misy ny Dirk Wiersum na raha mety hanana toetra lalina isika. Ankoatr'izay, ny mpiara-monina sy ny olom-pantatra dia tokony hoforonina amin'ny alàlan'ny teknolojia mitovy ihany (apetaho ny endrika noforonina tamin'ny AI noho ny firaketana an-tsoratra tamin'ny fotoana tena izy ary manangona tantara sy mombamomba ny haino aman-jery sosialy noforonina tamin'ny alàlan'ny lalina). Heverinao ve fa lasa lavitra be izany? Azoko fa, saingy lasa lavitra ny teknolojia ary ny zavatra rehetra hitantsika amin'ny sary sy ny feo dia avy amin'ny haino aman-jery ary ireo media ireo dia eo am-pelatanan'ny olona toa an'i John de Mol (billionaire, tompon'ny ANP sy Talpa). Ireo haino aman-jery ireo dia manana ny fombany rehetra hiteraka vaovao sandoka. Mazava ho azy fa tsy misy porofo momba an'io. Na izany aza vakio ity lahatsoratra ity mitovy tsara hahitana izay azo atao.
Mazava ho azy, ny valin'ny haino aman-jery sosialy ihany koa dia azo atosin'ny fihetseham-po amin'ny karazan-javatra rehetra (tena izy na lalina?) Ny mombamomba azy izay mamaly amin'ny fanehoan-kevitra toy ny hoe: "Ny milaza zavatra tahaka izany dia maharikoriko an'ireo marary". Mahamenatra tokoa ny mandà fa misy olona maty raha mbola misy porofo marim-pototra. Mety hahatezitra kokoa raha toa ka efa nampiasa nandritra ny am-polony taona isika PsyOps nilalao ho. Ny zavatra ataoko dia mampiakatra ny mety, tsy mandray andraikitra fa izany no izy.
Na izany na tsy izany dia hifanaraka tsara ao amin'ny Olana, fihetsika, vahaolana maxim, izay misy olana noforonina sy ny valin-kafatra nateraky ny lalana, dia mitarika ny antso ho amin'ny lalàna henjana. Ity lalàna mavesatra ity dia mety hihatra amin'ireo olona izay niantso azy ireo amin'ny ho avy fa hadino vetivety amin'ny fihetseham-po sy ny korontana rehetra. Raha te-hanaisotra ny olona tsy mpino rehetra ny fanjakana, ny olona iray tsy misy ("vavolombelona satroboninahitra tsy fantatra anarana)" dia afaka manome fanambarana fijoroana ho vavolombelona (jereo ny raharaha Holleeder momba ny satroboninahitra manapa-kevitra). Ny mpisolovava miaro dia tsy tokony misy (satria mety ho tsy fantatra anarana amin'ny ho avy izy) ary dia afaka miajanona ao ambadiky ny barany ny rehetra. Na iza na iza tsy mpanoherana ny fitondrana dia mety misy mpitsabo na voahidy amin'ny alalan'ny fitsarana sandoka.
Raha mampihatra ny tsindrin-tsakafo dia mety misy ny lalàna mahatonga ny fanafihana. Na izany aza, tokony hanadio haingana ny fitaovam-piadiana rehetra izay eo am-pandriana izahay amin'ireo trano rehetra ao Amsterdam! Mety izany ary mety tsy ho toy izany intsony!
Tags: advocaat, Derk Wiersma, Derk Wiersum, fahafatesana, Featured, haino aman-jery, famonoana olona, maty
18 Septambra 2019 ao amin'ny 21: 51
Raha tsy manaraka ny zava-niseho teo aloha (Fake) ianao dia hino ny vaovao anio 18 Sept 2019.
Mihetsi-po, vonona, ka tsy maintsy manaraka ny vaovao (sandoka) ianao raha tsy izany dia tsy ho fantatrao ny fepetra na vokatry ny vaovao (sandoka).
18 Septambra 2019 ao amin'ny 21: 53
Milaza indray ny olona sy ny ankizy hoe:
Ahoana no ahafahanao miala sasatra mandritra ny ora vitsivitsy ary ilazana fa misy ifandraisany amin'ny asany io, raha mbola TSY VALINDRANA ihany ny manadihady?
Ahoana no ahafahan'ny efitrano faharoa milaza fa avy hatrany, na dia efa natao ny fikarohana zero.
Maninona no tsy maheno momba ny CPR
Tsy nisy nifoha teo amin'ny fiara mpamonjy voina ary aiza ny ekipa trauma. Tsia, fa tao ve izy ireo?
Ahoana no tsy nahare ny tifitra ilay mpifanila trano raha nisy zazalahy iray teny an-dàlana nitantara ny vaovao tamin'ny tanora fa taitra tamin'ny akoho izy.
Ahoana no ataonao ao an-dohanao mba hampisehoana ny ankizy toy izany, nampahafantarina ve ny ray aman-dreny?
Ary ny mpifanila trano ahoana no mbola tsy nandrenesanao tifitra rehetra.
Afaka milaza ve ianao fa somary manitra kely ilay toerana ...
Zazalahy kely nifoha tavela, arabe
Ny mpiara-monina tsy nahare na inona na inona ??
18 Septambra 2019 ao amin'ny 22: 28
Miaraka amin'ny haitao lalina dia afaka mamolavola lehilahy iray misy zaza eny an-tsorony ianao ary mametraka endrika tsy misy (nefa misy ny tena izy) (ao anatin'izany ny feo namboarina).
18 Septambra 2019 ao amin'ny 22: 57
Ny fanodinana tongotra dia mitondra ny saina ho amin'ny fomba fanekena (hypnose NLP)
19 Septambra 2019 ao amin'ny 00: 32
Jereo eto hoe ahoana ny fomba fiasa:
19 Septambra 2019 ao amin'ny 08: 19
Eny tokoa, mety ho sandoka ihany koa ny lahatsary manodidina an'io mpifanila trano io.
Fanazavana kely fa rehefa afaka izany.
Ny lehilahy ao aoriana dia miankohoka niaraka tamin'iny kibo be iny ary nandeha; avy eo, ny alokaloka dia tonga eo ary tsy eo intsony, indraindray ny aloka dia tsy eo.
Ilay tena; Topazo maso ilay fihetsika tsy mahazatra amin'ny aloka
ary ny antsoina hoe paompy eo amin'ny maso. Hosoka!
Tifitra jiro iray mampiasa ny voka-manarom-tariby, ha ha, mivadika mora satria midika izany fa ny jiro dia tsy mifanentana amin'ny palitaon'ilay ankizilahy tsy maintsy mihazona ny lohan'ny mpifanolo-bodirindrina amin'ny alokaloka.
Ny fehikibo atsangana amin'ny tendrony dia tokony ho vatobe taratry ny masoandro.
Ny aloky an'io van amin'ny rindrina io dia manana zoro tsy mety raha mampitaha azy amin'ny aloky ny jiro.
Ny sary amin'ny ankapobeny amin'ny endrika tarehy dia misamboaravoara, adala be fotsiny amin'ny teny, ny AT5 dia misy fakan-tsary ambony, fa tsy izao akory, ha ha, toa be Fake be.
Mazava ho azy fa tsy hitanao izany amin'ny finday avo lenta, saingy hitanao fa ao amin'ny solosaina voalohany tsara indrindra raha zarao mandeha.
18 Septambra 2019 ao amin'ny 21: 55
Mihainoa ny mpanadihady. Hiddema no anontaniana, efa ny valin'ny haino aman-jery.
Hoy ilay mpanadihady: "Azo atao ny mandeha any amin'ny nosy tsy misy mponina mandritra ny androm-piainany ilay mpisolovava izay manohana ny satroboninahitra.
Ka navela hijanona tsy fantatra anarana izany, ny haino aman-jery dia efa nanapa-kevitra fa ny mpilalao sarimihetsika Hiddema izay, araka ny filazany dia nitsambikina tamin'ny dihy (araka ny nolazainy taty aoriana tamin'ny resadresaka iray) dia tokony hitsipaka amin'ny The Hague toy ny akoho manam-pahefana.
minitra 3; 37
18 Septambra 2019 ao amin'ny 22: 27
Eny eny ary zavatra hafa ho avy:
"Antsoina isika mba tsy hiasa ho an'ny tenantsika manokana."
Tsy ho ela dia mety hiafara amin'ny fanasaziana ihany ny 'fiheveran-tena' tsy ho ela.
19 Septambra 2019 ao amin'ny 08: 41
Ny fijoroana ho vavolombelona amin'io zaza io dia mahatonga ahy tsy hisalasala. Malahelo ny fihetseham-po rehetra. Io lehilahy malefaka amin'ny horonantsary 'art de diso diso "izay zarainao ity dia karazana psychophyte vaovao izay mahita fa mahafaly azy fa tsy haharaka ny haitao intsony ny masera ary koa hosazina foana. Matetika avy amin'ny klioba fanatanjahan-tena havia iray izay tratry ny trangam-panao sasany tamin'ny andro 8e taorian'ny nahaterahany.
Hiddema (sy Wiersma) toa variana ihany koa amin'io. Efa ela vao nazava tamiko fa tsy maintsy hitarika ny vahoaka (sy ny parlemanta) i Hiddema (ary ny parlemantera) any amin'ny polisy, izay raha vao misy zavatra lazaina fa misy zava-misy dia antsoina hoe 'mpanao heloka bevava' ary nambara ho mpandika lalàna. Na eo amin'i Baudet na miaraka amin'i van Otten dia tsy miraharaha azy. Raha ny marina, tsy azoko fa azony atao ny mihantona ny tontolo moccro fotsiny eo am-bavany, 'daholo' basy ao ambanin'ny fandriany izy ireo, IQ ambany iray, ny hatsarako dia tena faniriako ny hanombohantsika farany an'io ady io Miozolomana, toa tsy afaka hiandry amin'ny NWO izy ireo miaraka amin'i Isiraely afovoany.
Ambany fa ambany. Ny korontana rehetra.
19 Septambra 2019 ao amin'ny 13: 06
Tena misy ny Mocro Mafia sa misy mpanazatra AIVD vitsivitsy voaofana tsara alàlana hilalao ny Mocro Mafia?
19 Septambra 2019 ao amin'ny 14: 03
Ezaka kely ataonao mba hanafenana ny zava-misy fa i Madurodam dia tena polisy, manambany fa tsy teny tsara intsony. Junta dia manomboka mifampiresaka akaiky, mpisolovava tsy mitonona anarana, mpitsara tsy mitonona anarana ... efa voaheloka vonona
19 Septambra 2019 ao amin'ny 16: 55
Ny famokarana lalina dia John .. fa virjiny kosa ilay taratasy ao amin'ireo mpamatotra ireo. Tsy mbola voamarika hatramin'izao. Famokarana sarimihetsika mahafinaritra ..
19 Septambra 2019 ao amin'ny 17: 24
Ho fanamorana ny adin-tsaina, adinontsika fa ireo karazan-jotra Hegelian ireo dia famporisihana hiaro na hanome onitra ny mpampahalala fanjakana, mpisolovava / mpanao gazety / vavolombelona amin'ny satroboninahitra tsara kokoa. Ny tamberim-bola amin'ny alohan'ny mpandoa hetra dia mpamily lehibe eto ihany koa. Mandainga ny lainga
20 Septambra 2019 ao amin'ny 07: 25
Voalohany dia nanana mafia Holleeder izahay; izao izahay manana Mocro na nacromaffia miaraka amin'i Ridouan Taghi. Izy ireo dia samy mazava tsy misy haingo AIVD PsyOp izay avela hilalao ny andraikiny amin'ny mafia sandoka. Entina manetsika ny fepetra vaovao ataon’ny polisy izany. Ny fanafihana ny tranobe Telegraaf dia sandoka; tsy marina ny fanafihana ny tranobe Panorama. Ny zavatra rehetra dia sandoka. Famoahana haino aman-jery sandoka misy ny fitsarana. Aza miditra ao! Io no lalao Olana, Fanehoan-kevitra, vahaolana vahaolana avy amin'ny fanjakana hanodinana ny toeran'ny polisy amin'ny alàlan'ny dingana!
20 Septambra 2019 ao amin'ny 09: 41
Ary eny, jereo io
20 Septambra 2019 ao amin'ny 09: 26
Misaotra betsaka anao amin'ity fanoratana mazava ity.
Mety hahita ny hoe marina io fiheverana io.
Saingy ny fanazavanao sy ny famaritana ny tantaran'ny tantara dia hitako ny tantaranao
toa maharesy lahatra kokoa noho ny haino aman-jery mahazatra.
Misy fantsona hafa amin'ny Internet ve mizara ny hevitrao? Tokony hiely amin'ny hevitro izany.
20 Septambra 2019 ao amin'ny 14: 14
Tsia, tsy misy fantsona hafa.
Ireo haino aman-jery hafa rehetra dia voatanisa lavitra. Niburu.co, ohatra, dia tantanan'ny Freddy Heiniken, ohatra, avy amin'i Freddy Heiniken. Tsy hosoratany mihitsy izy fa fandrahonana ny fakana an-keriny.
Ny haino aman-jery hafa voafehy no mifehy ny 911; manoratra momba ny ufos sns ary miresaka fotsiny momba ny sainam-pirenena mianjera (izay tsy mitovy amin'ny hoavy PsyOp).
21 Septambra 2019 ao amin'ny 16: 56
Milaza ny marina ve i Grapperhaus?
Eto amin'ity tranokala ity dia nampiseho imbetsaka fa ny fanafihana ny tranoben'ny Telegraaf ao amin'ny Basis weg dia diso ary ny fanafihana ny tranobe Panorama dia resaka efa natao tanteraka. Grenady miady amin'ny tanky izay manary fahasimbana be lavitra noho ny fahasimbana izay naseho ary misy.
Raha ireo mpanao heloka bevava rehetra (antsoina hoe) no mifandraika amin'izany (miaraka amin'ny Fanafihana Fake) dia afaka milaza ianao fa tsy nanao tsara ny devoany i Grapperhaus ary tsy nanamarina i Parool izay niseho tao amin'ny mailakany. Milaza zavatra fotsiny izy ireo ary manao zavatra ary mila ataontsika tsara an'azy ireo olona ireo.
Ary maninona no tsy zaraina intsony ity lahatsoratra ity, ny fahalalahana maneho hevitra dia esorina tanteraka amin'ny lehilahy manala baraka toa an'i John der Heuvel, tsy maintsy menatra ny tenany izy, BAH!
21 Septambra 2019 ao amin'ny 17: 44
Grapperhaus sahirana amin'ny zavatra hafa ..
21 Septambra 2019 ao amin'ny 17: 09
Ny toetr'andro mampahatezitra amin'ny karazana mega toy izany dia ny mahaliana azy ireo kokoa noho ilay niharam-boina (tsy misy safidy hafa satria tsara raha fihavanana izany ……
Ary na izany aza tsy misy na iray aza famantarana ny omen'ny manam-pahefana antsoina hoe Pôlisy, ny vinavina rehetra
21 Septambra 2019 ao amin'ny 17: 47
angamba nahazo ny toro-hevitra vitsivitsy avy amin'ny fianakaviana zorregieta i VenJ sy ny OM. Fanaporofo porofo bebe kokoa aza fa napetraka avokoa ny zavatra rehetra ary tsy milefitra ny olona, ​​matahotra sao tsy ho voavaha io raharaha io amin'ny hoe inona no antony manosika ny lalàna vaovao. Hafahafa ny fomba namaha ny grapperhaus avy hatrany 🙂
24 Septambra 2019 ao amin'ny 15: 01
pablo escobar dia tsy avela hamatotra ny tadin-dranomaso ~ (raha efa misy io), ny iray mpilalao taorian'ny iray. Porofon'izany, mety handoavany kely ihany!
24 Septambra 2019 ao amin'ny 20: 33
INONA NO TOKONY IZANY?
Ny didim-pitsarana lehibe tahaka izany, tahaka ny fanafihana ny rafitry ny fahamarinana, manitsakitsaka ny lalàna mifehy sy ny sisa
raha tsy nisy nahavanon-doza dia tsy voaheloka, tsy hita akory, tsy misy ahiahy, tsy misy n'inona n'inona n'inona nefa mbola nisy fanambarana maloto toy izany.
Motive nanameloka ny Media, screign miaraka amin'ny sary telo misy ilay lasitra fotsiny, miaraka amin'ny lahatsary hafahafa amin'ny 1.
Aiza ny fianakavian'ny mpisolovava, ny tantara iray manontolo no mametraka ny risika ny haino aman-jery noho ny antony manosika azy ireo
mba hanangana ny herin'ny telopolo amby telopolo nefa tsy misy hifandraika amin'ny nahavanon-doza.
Aiza ho aiza ny mpisolovava ao amin'ny NL mitady an'io fanontaniana mampihetsi-po io, aiza ny lalàna!
28 Septambra 2019 ao amin'ny 17: 31
Fotoana fohy taorian'ny fanafihana, nisy lahatsoratra navoaka tamin'ny Internet izay nilazan'ny mpiara-monina iray fa ny famantaranandro fanairana dia nandeha ho an'ny 07: 33, ary nandre ny tifitra izy avy eo ...
Ny olona mampiasa pilina iray dia tokony hokarakaraina araka ny filazan'i Grapperhaus. Tena betsaka amin'ny politika momba ny fandeferana holande… ..
Mpisolovava vaovao iray no voatendry hatrizay, izay hijanona tsy fantatra anarana. Ny mpitsara sy ny mpampanoa lalàna dia afaka mijanona ho tsy fantatra anarana amin'ny ho avy. Raha misy olona tokony hangina, ny hany ataony dia ny fandrahonana hanandrana izany olona izany amin'ny raharaha fitsarana tsy fantatra anarana sy hanipy azy ireo any am-ponja ...
8 Oktobra 2019 ao amin'ny 19: 18
Oh eny, misotro fisotroan-tena ao amin'ny Rode Hoed ary manao resaka miaraka amin'ireo mpitsara sy mpisolovava ary mazava ho an'ny mpanenjika sy ny karazan-damba hafa, fantatsika izahay
Ity fanamarihana ity dia mifanentana amin'ny toe-karena, quoute: "Inona no dikan'ny 9 / 11 amin'ny 2001 ho an'ny filan'izao tontolo izao, fanamarihan-tany toy izany dia ny famonoana mpisolovava iray noho ny fampiharana ny asany amin'ny fandaminana ara-dalàna holande".
8 Novambra 2019 ao amin'ny 00: 14
Ary jereo eto indray ao amin'ny gazety propagandy any Holandy fa mety tsy havoaka ilay boky.
Na mety manainga ny voaly amin'ny alalàn'ny angano tanteraka ilay boky, midika izany fa nofinofy tanteraka.
Moa ve tsy tokony hiandry taona vitsy isika mandra-lasa ireo olona misaina izay mahalala ny resaka fakana an-keriny sandoka dia lasa nogadona, ary avy eo vao hamoaka ny HOAX HEINEKEn ry zareo,
HEINEKEN TSY NITSANGANA an-keriny ASA ITY HATRANY ARY HANOKO NY GRASS-CLEAR HIDITRA 😉 Cheers
6 Desambra 2019 ao amin'ny 20: 51
16 Desambra 2019 ao amin'ny 23: 15
Efitrano fitsarana voarara ho an'ny mpanao gazety sy ny vahoaka
Ary ny telegraaf dia mitatitra indray fa ny halehiben'ny dia ho lehibe noho ny an'i Holleeder.
Mpisoratra mpanoratra vaovao avy amin'ny mol mieritreritra fa efa nipoitra ary manana ny anjara toerany
natolotr'i Mens Taghi sy John van die Heuvel sy Vugts ary mpiara-miasa ary Grapperhaus naturlich
angamba efa vonona ihany ilay sarimihetsika, mety ho, tantara mahafinaritra
17 Desambra 2019 ao amin'ny 00: 47
Filming? Moa ve isika tsy mitory sarimihetsika fotsiny? Fa eo kosa no atao hoe "vaovao"
Mpanao fihetsiketsehana mampidi-doza ... mazava ho azy, John de Mol dia tsy afaka mamokatra vokatra lalina. "Io teknika io dia tsy mbola ao" ilay kohaka kohaka ...
Manana rahavavy tena mamy sy sambatra i John, ka mahatoky i John. Marina! Tena misy i Ragouan Tagi!
Ary avy eo dia nisy elefanta iray nitondra snout be dia be ..
« Handeha ady ve eo amin'ny Etazonia sy Iran amin'izao fotoana izao?
Ny lahateny nataon'ny Greta Thunberg UN dia mampahatsiahy ny lahatenin'ny "zazakely nariana tamin'ny incubator" tamin'ny ady tany Irak »
tamin'ny Febroary 2020
Total visits: 24.871
Zandi Eyes op Ny tsimok'aretina Corona, ny fohy fohy mankany amin'ny fanafoanana ny vola sy ny vokatra ara-toekarena manerantany
ZalmInBlik op Ny tsimok'aretina Corona, ny fohy fohy mankany amin'ny fanafoanana ny vola sy ny vokatra ara-toekarena manerantany